5 နည်းလမ်းတွေ Expo2020 ဒူဘိုင်း၏စီးပွားရေးမြှင့်တင်ပါလိမ့်မယ် | စီးပွားရေးကို
5 နည်းလမ်းတွေ Expo2020 ဒူဘိုင်း၏စီးပွားရေးမြှင့်တင်ပါလိမ့်မယ်
အောက်တိုဘာလ 20, 2020 မှစ. , ဧပြီ 10, 2021 မှီတိုင်အောင်, ယူအေအီးဟာ 2020 ကမ္ဘာ့ဖလားကုန်စည်ပြပွဲတရားမျှတသောမှာယဉ်ကျေးမှု, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတစ်ခုအခမ်းအနားဖို့ကမ္ဘာကြီးကိုကြိုဆိုပါလိမ့်မည်။
ဒါဟာကမ္ဘာ့ကုန်စည်ပြပွဲယင်း၏တည်နေရာဒူဘိုင်းအတွက်ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 site ကိုဖြစ်ခြင်းနှင့်တကွ, အာရပ်ဒေသတွင်း၌ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရက်စွဲမကုန်မှီတိုင်အောင်, 190 နိုင်ငံများ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကယူအေအီးသို့လူသန်းပေါင်းများစွာအတွက်ရောက်စေဖို့သတ်မှတ်ထားပြပွဲဖြစ်ရပ်အတွက်ပါဝင်မှုကိုအတည်ပြုခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါကုန်စည်ပြပွဲ 2020 များအတွက်ရွေးချယ်ထားသောဆောင်ပုဒ်ကတော့ sub-themes များသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အားမပျက်စီးဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ "စိတ်ကိုချိတ်ဆက်ခြင်းအနာဂတ် Creating" သည် Mobility ကိုနှင့် အခွင့်အရေး.
အဆိုပါကုန်စည်ပြပွဲ 2020 ခရီး 27 အပေါ်တာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်လာခဲ့သည်th ဒူဘိုင်းရွှင်လန်း, Jubilant နှင့်မီးရှူးမီးပန်းများနေရခြင်းကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပအခွင့်အရေးကိုအနိုင်ရခဲ့သည့်အခါနိုဝင်ဘာလ 2013 ။ တစ်ဦးကအမျိုးသားအားလပ်ရက်အောက်ပါနေ့ကနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးကိုပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများများအတွက်ကြေငြာခဲ့သည်။ ဒါဟာဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ကြေညာချက်ကိုသင်ပြသနိုင်ဖို့ဖြစ်ပြီး, နောက်ပိုင်းတွင်ထိုအဖြစ်အပျက်ဒူဘိုင်းမှသာဆိုလိုတယ်ပေမယ့်မြေတပြင်လုံးယူအေအီးနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ။ ဒါဟာကုန်စည်ပြပွဲကိုတရားဝင်ကျော်သည်အချိန်အားဖြင့်သားစဉ်မြေးဆက်အဘို့ကြာရှည်မယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝပြီးကြာရှည်ခံအမွေချန်ထားမှာပါရည်ရွယ်သည်။
Credit: ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 Youtube ကို
အောက်ပါအတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 ၎င်းတို့၏ပါဝင်မှုထုတ်ပြန်ကြေညာပြီ
စျေးကွက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများတိုးတက်မှုအတွက်ဖြစ်ကြပြီးအများအပြားပလက်ဖောင်းပေါ်ထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်နေ။ စူပါစတားအားဖြင့်ကုန်စည်ပြပွဲအတော်ကြာထောက်ခံချက်ရှိခဲ့သည်နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများပြီးသားမိတ်ဆက်ပြသကြ သူတို့ရဲ့ဆန်းသစ်ခြင်းနှင့်အနာဂတ်ရှာဖွေနေတကွတဲ။
အပြင်လူအပေါင်းတို့သည်ဘုန်းအသရေနှင့် pageantry ဘယ်လိုကုန်စည်ပြပွဲ 2020 စီးပွားရေးကိုထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်တစ်ဖွဲ့လုံးကဒူဘိုင်းကိုအဘယ်သို့အကျိုးရှိဆောင်ကြဉ်းကြလိမ့်မည်နည်းကနေ
ဒူဘိုင်းကုန်စည်ပြပွဲ 2020 ၏တရားဝင်ယူကျု့ချန်နယ်
5 နည်းလမ်းတွေ Expo2020 ဒူဘိုင်း၏စီးပွားရေးမြှင့်တင်ပါလိမ့်မယ် - ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 YouTube ကို Channel ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
အလုပ်အကိုင်တွေဖန်တီးပေးဖို့တစ်ဦးကတိုင်းပြည်၏နိုင်စွမ်းယင်း၏စီးပွားရေးကဏ္ဍများအပြေးနှင့်အအလုပ်လုပ်တဲ့ဖြစ်ကြောင်းတစ်ဦးညွှန်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးနေကြသည်ပြီးတာနဲ့တိုးမြှင့်စားသုံးသူယုံကြည်မှုဤအရပ်မှတိုးမြှင့်သုံးစွဲမှုလည်းမရှိ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပွင့်လန်းခြင်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, လူတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးအရရေရှည်တည်တံ့စီးပွားရေးတိုးတက်လာသောလူနေမှုခံစားနိုင်။ ဒူဘိုင်းကမ္ဘာ့ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 များအတွက်ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်အဖြစ်တရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်ပြီးနောက်ကြောင့် 277 ကျော် 149 အလုပ်အကိုင်များလေ့လာမှုတစ်ခုအပေါ်အခြေခံပြီး 2013 အတွက်ကုန်စည်ပြပွဲ၏အဆုံးသို့မရောက်မှီတိုင်အောင် 2021 အကြားဖန်တီးရမည်ဖြစ်ကြောင်းခန့်မှန်းခဲ့သည်။
ဤရွေ့ကားအလုပ်အကိုင်များခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း, လက်လီအပါအဝင်စီးပွားရေး၏ကဏ္ဍအားလုံးတွင်ဖန်တီးလျက်ရှိသည်, ဘဏ္ဍာရေး, အိမ်ခြံမြေ, ဆောက်လုပ်ရေး, လကွောငျးသယျပို့ဆောငျရေး, ဧညျ့ဝတျကပြွှေနျခွငျးနည်းပညာတက္ကသိုလ်, မီဒီယာ & ဆက်သွယ်ရေး, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, လုံခွုံရေးကုန်သွယ်ရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အများအပြားကပို။ အဆိုပါတရားဝင် Expo2020 ဒူဘိုင်းက်ဘ်ဆိုက်၏ 'အလုပ်ရှာဖွေရေး' 'ပုဒ်မတွင်, CV ကိုရဲ့တင်ပြရန်နှင့်အများအပြားရရှိနိုင်ပါအခွင့်အလမ်းများကိုလျှောက်ထားရန်ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ ယောဘသည်အခွင့်အလမ်းကုန်စည်ပြပွဲနဲ့ post-ကုန်စည်ပြပွဲခေတ်ကာလအတွင်း Pre-ကုန်စည်ပြပွဲရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 နှင့်အတူအားလုံးအလုပ်အဖွင့်ကိုကြည့်ပါ
အမှုတော်တို့ကိုအောက်တိုဘာလ 2020 များအတွက်ပြင်ဆင်မှုအတွက် Expo2020 site ကိုများနှင့်အခြားသက်ဆိုင်ရာဒေသများမှာနေတုန်းပဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောကြောင့်ယခုပင်လျှင်, ထောင်ပေါင်းများစွာဆောက်လုပ်ရေး, နည်းပညာနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍတို့တွင်အထူးသဖြင့်အလုပ်ပါပြီ။ အများအပြားကနိုင်ငံခြားအလုပ်အကိုင်များလည်းကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများတွင်၏ပါဝင်မှုမှတဆင့်ဖန်တီးခဲ့ကြပြီ။ အလုပ်ရှာဖွေသူများသမိုင်းချမှတ်ခြင်းအတွေ့အကြုံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာတွင်ဤအခွင့်အလမ်းများကို၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါတယ်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းယူအေအီးစီးပွားရေးရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအတွက်အလွန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုအရ ဒူဘိုင်းရဲ့ ဌာန ခရီးသွားလုပ်ငန်း & စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းစျေးကွက်, ဒူဘိုင်းအလားတူကာလပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအတွက်နှစ်ရာခိုင်နှုန်းတိုးမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ 2019 ၏ပထမသုံးလပတ်ရဲ့အဆုံးမှာအဖြစ်, ဒူဘိုင်း 4.75 သန်းကိုနိုင်ငံတကာဧည့်သည်ကိုကြိုဆိုခဲ့သည်။
ဒူဘိုင်းထိုကဲ့သို့သော Burj Khalifa က The Palm နှင့် Burj Al Arab ဟိုတယ်အဖြစ်ဆွဲဆောင်မှုတွေနဲ့ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းမြေပုံပေါ်တွင်အဓိကပါရှိပါတယ်။ ယခုပင်လျှင်, ယူအေအီးအခြားရှစ် intangible ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အတူတရားဝင်လေးယဉ်ကျေးမှုယူနက်စကိုကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ဆိုဒ်များရှိပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 ၏ဒူဘိုင်းရဲ့ hosting အတွက်နောက်ထပ်ကုန်စည်ပြပွဲစဉ်နှင့်အပြီး, ရှေ့တော်၌ထိုပြည်သို့ခရီးသွားဧည့်များ၏ရောက်လာတိုးတက်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ခန့်မှန်းခြေ 25 သန်းလူများ 2020 အကြားဒူဘိုင်းအတွက်ကုန်စည်ပြပွဲ 20 သွားရောက်လည်ပတ်ရန်မျှော်လင့်နေကြသည်th အောက်တိုဘာလ 2020 နှင့် 10th ဧပြီလ 2021 ။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းစျေးကွက်များအတွက်ဒူဘိုင်းကော်ပိုရေးရှင်း (DCTCM) အမြဲလွယ်ကူလှည့်ခရီးသည်များလွယ်ကူစွာပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာရဖို့ဒူဘိုင်းသို့ကြွလာဘို့ဖြစ်စေခြင်းငှါအစိုးရ၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအေဂျင်စီများနှင့်အတူလက်၌လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ဒူဘိုင်းဒေသတွင်းအဓိကလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးအချက်အချာနေရာနှင့်မည်သည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ destination သည်၎င်းတို့၏လမ်းအပေါ်ခရီးသွားများအတွက်လွယ်ကူသောဆက်သွယ်မှုအချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 နှင့်အတူဒူဘိုင်းတစ်ခရီးသွားဧည့်ဦးတည်ရာအဖြစ်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုဖြစ်လာခဲ့ပါသည်, ဤနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတိုးတက်မှုများအတွက်ဂျီဒီပီအတွက်အရှိန်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။
စီးပွားရေးတိုးတက်နေတဲ့သည်နှင့်ရေရှည်တည်တံ့အခါရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုတိုးမြှင်ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံစုံပရော်ဖက်ရှင်နယ်န်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတခု EY အနေဖြင့်လွတ်လပ်သောအချက်အလက်များအရတိုင်းပြည်၏အနာဂတ်၌ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 ဒူဘိုင်းရဲ့ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (အမေရိကန်ဒေါ်လာ 122.6 ဘီလီယံ) AED 33.4 အားဖြင့်ဘီလီယံအထိယင်း၏စီးပွားရေးကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် 905,200 နှင့် 2013 အကြား 2031 အလုပ်အကိုင်အနှစ်ထောကျပံ့ပေးလိမ့်မယ်။
ဒူဘိုင်းကြောင့် Expo2020 hosting ရန်၎င်း၏အခွင့်အရေးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုတိုးကြည့်ဖို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကြောင့်ဘေးကင်းလုံခြုံကြိုဆိုပွဲ, အမြတ်အစွန်းဖြစ်ခြင်းများအတွက်ဂုဏ်သတင်းရှိပါတယ်တဲ့အခါတိုင်းပြည်အတွက်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်လာ။ ယူအေအီးအားလုံးနှင့်ပိုအလွယ်တကူပင်လယ်ကွေ့နှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသထွက်ရပ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကုန်သွယ်ရေး, လက်လီ, Real Estate & ဖွံ့ဖြိုးရေး, ဘဏ္ဍာရေး, Entertainment ကခရီးသွားလုပ်ငန်း, ဆောက်လုပ်ရေး, ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်း, လေကြောင်းနှင့်များစွာသောထိုထက်ပိုသောဒေသများသို့ပွင့်လင်းကြသည်။
ယခုပင်လျှင်အများအပြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဒူဘိုင်းအတွက်အကိုင်းအခက်များနှင့်ဆိုင်များတွင်ပြောင်းရွှေ့သို့မဟုတ်ဖွင့်လှစ်ပါပြီ။ ဆောက်လုပ်ရေးကဤစီမံကိန်းများအတွက်အများစုအဘို့အဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့်နိုင်ငံစုံအဖွဲ့အစည်းများသူတို့ကိုယ်သူတို့ဂုဏ်ယူစွာသူတို့ရဲ့စျေးကွက်နဲ့တံဆိပ်တပ်ပစ္စည်းများကို၎င်းတို့၏အသင်းအဖွဲ့ပြသသည်၎င်း၏အရာရှိတဦးကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူကုန်စည်ပြပွဲ align လုပ်ဖို့နေကြသည်။ ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားနှစ်ဦးစလုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကမ္ဘာ့ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 ဒူဘိုင်းတွင်ကျင်းပလျက်ရှိနှင့်တကွ, ယူအေအီးရဲ့စီးပွားရေးကိုတည်ငြိမ်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်၎င်းတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများလုံခြုံအာမခံပြန်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်မှုရှိနိုင်ပါသည်။
ဒူဘိုင်းပိုင်ရှင်တွေယူအေအီးနိုင်ငံသားများ, ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူအများအပြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှမူလနေရာဖြစ်သည်။ အဆိုပါကုန်စည်ပြပွဲ 2020 ၏ဒူဘိုင်းရဲ့ hosting အတွက်မှအကျိုးမယ်လို့အများအပြားသည်ဒေသခံ Home-အရွယ်ရောက်အယူအဆရှိပါတယ်။ ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတိုင်းစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတစ်ခုကျောရိုးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, များစွာသောအစိုးရများစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုများနှင့်ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီ၏တိုးတက်မှုအားပေးဖို့ပေါက်ဖွားမျိုးစေ့ starter အစီအစဉ်များကိုပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်။ ပြည်တွင်းဖြစ်စီးပွားရေး, ကြီးမားတဲ့နိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီများနှင့်အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများရဲ့နှစ်ဦးစလုံး, အပန်းဖြေ, လက်လီနှင့်အထွေထွေစီးပွားရေးစက်မှုလုပ်ငန်း Real Estate, မီဒီယာ, ခရီးသွားနှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးမျိုးသောကဏ္ဍများအတွက်စားသုံးမှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုကြည့်ဖို့မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။
အသစ်နှင့်ထွန်းသစ်စစျေးကွက်ပင်မှရရှိနိုင်သမျှသောသူတို့ကဤကဏ္ဍများ၌ပေါက်ပြီအများအပြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။ ဒေသခံကန်ထရိုက်တာများအဘို့အတျောမြားမြားနညျးလမျးဝယ်ယူရေးအခွင့်အလမ်းများရရှိနိုင်ပါသည်ဖြစ်ကြောင်းလေလံနှင့်တင်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်များမှတဆင့်စူးစမ်းနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ Expo2020 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းများကိုမှတ်ပုံတင်ရေးနှင့်အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများရဲ့အထူးသဖြင့်အကျိုးရှိသောမှတစ်ဆင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာအခမဲ့-to-အသုံးပြုမှုအရာရှိတဦးကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအွန်လိုင်းဈေးရှိပါတယ်။ ဤသည်ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်ကနယ်စပ်ဒေသကသူတို့ပူဇော်ဖို့ရှိသည်အဘယ်အရာကိုကမ္ဘာတွင်ပွသနိုငျဖန်တီးဖို့ရည်မှန်းထားတဲ့ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒူဘိုင်းကုန်စည်ပြပွဲ 2020 လမ်းညွှန်
အဆိုပါ Expo2020 ကြီးမားသောမှာဒူဘိုင်းနှင့်ယူအေအီးအတွက်အခြေခံအဆောက်အဦများအတွက်ကြီးမားသောဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတှေ့မွငျခဲ့သညျ။ ထိုကဲ့သို့သောလမ်းများ, မက်ထရိုလိုင်းများနှင့်တံတားအဖြစ်ကုန်စည်ပြပွဲ site ကိုမှဦးဆောင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတိုးချဲ့နှင့်တိုးတက်ပြီ။ ပိုပြီးဟိုတယ်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောစီမံကိန်းများ, အိမ်ရာများ, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အခြားစီးပွားဖြစ်အဆောက်အရှိပါတယ်။
ရရှိနိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုဆိုက်တည်နေရာဒေသအများစုပြန်သုံးနိုင်ပါသည်, ဤရေရှည်တည်တံ့ရေးပဏာမအဆိုပါကုန်စည်ပြပွဲပြီးနောက်ခရိုင် 2020 အဖြစ်လူသိများလိမ့်မယ်လို့အကြံပြုထားသည်။ အဆိုပါကုန်စည်ပြပွဲများအတွက်အခြေခံအဆောက်အဦများနှင့်သာယာအဆင်ပြေမှုများ၏ပြဋ္ဌာန်းချက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အားမပျက်စီး, Mobility ကိုများနှင့်အခွင့်အလမ်း၎င်း၏ဆောင်ပုဒ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါ site ကိုလည်း Jebel Ali အတွက်အယ်လ် Maktoum အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်, ဒူဘိုင်းကမ္ဘာ့ဖလားဗဟို (DWC) မှအနီးကပ်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်ဤဧည့်သည်များနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါအခြေခံအဆောက်အအုံနေဆဲကုန်စည်ပြပွဲစဉ်နှင့်အပြီးရှေ့တော်၌, အသုံးပြုမှုအတွက်ဖြစ်လိမ့်မည် နှင့်တစ်ဖွဲ့လုံးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်စီးပွားရေးအတွက်မြှင့်တင်ရန်။
5 နည်းလမ်းတွေ Expo2020, ဒူဘိုင်း၏စီးပွားရေးမြှင့်တင်ပါလိမ့်မယ်
လက်မှတ်သတင်းအချက်အလက် 1day, 3-ရက်, လစဉ်နှင့်ရာသီအလိုက် 'passes ၏မူကွဲထွက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်နှင့်ကျောင်းသားအထူးလျှော့စျေးရှိလိမ့်မယ်လို့; 65 နှစ်ပြဌာန်းခွင့်, အရွယ်ရောက်အထက်တွင်5နှင့်နှင့်လေးတွေတက်၏လူတို့အဘို့နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည် access ကို။
ကမ္ဘာ့ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 ဒူဘိုင်းကပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားနှစ်ဦးစလုံးသက်ဆိုင်သူများများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာယုံကြည်မှုသွတ်သွင်းပေးရန်လိုအပ်ကြောင်း, လက်ျာထိတွေ့မှုနှင့်ဂုဏ်သတင်းကိုအားပေးတော်မူပြီ။ ဒါဟာအစရောနှောယူအေအီးနိုင်ငံသားများနှင့်နေထိုင်သူများအဘို့မာနထောင်လွှားနေတဲ့သဘောမျိုးကြီးထွားလျက်ရှိသည်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအတွက်လိုအပ်ရှည်တည်မြဲအမွေချန်ထားမည်။
ဒူဘိုင်း - ယူအေအီး
(Marketing ကိုဆက်သွယ်ရေး, စာရေးဆရာ, အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းရှင်)
LinkedIn အပေါ် Theresa R. Fianko နှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါ
လူတိုင်းနီးပါးဒူဘိုင်းဗီဇာထီလျှောက်ထားနိုင်သည်! တစ်ဦးယူအေအီးဗီဇာအလုပ်အကိုင်များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီမှသာနှစ်ဦးကိုလိုအပ်ချက်ရှိပါတယ်: သင်အလုပ်အကိုင်ဗီဇာများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီလျှင်အနည်းငယ်ကလစ်နှင့်အတူထွက်ရှာတွေ့ဖို့ဒူဘိုင်းဗီဇာထီကိုသုံးပါ။ အမျိုးသားရေးတစ်ယူအေအီးမဟုတ်သူမဆိုနိုင်ငံခြားကျွမ်းကျင်သူများ, နေထိုင်ပြီးဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာလိုအပ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထီနှင့်အတူ, သင်အနိုင်ရပါလိမ့်မယ် သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုနေထိုင်ခွင့် / အလုပ်အကိုင်ဗီဇာ!